Etu ị ga - esi nwetaghachi akaụntụ Instagram gị maka hacking | Gam akporosis
O kwere omume na anyị hụrụ na na Instagram enwere onye ọrụ ọzọ nwere aha anyị. Nke a abụghị ihe dị oke njọ, belụsọ na ekwuru akaụntụ na-anwa ime ka a mata anyị. N'okwu a, anyị ga-eweghachi aha njirimara anyị, iji gbochie onye ahụ ịbụ onye okike. Ngwa ahụ na-atụgharị uche n'ọtụtụ okwu nke nke a mere, nke dị mma iburu n'uche.
Ya mere, n'okpuru Anyị na-egosi gị mgbe anyị ga-emerịrị nkwupụta a nke aha njirimara anyị na Instagram, yanakwa ụzọ enwere ike ịme nke a. Ya mere na ọ bụrụ na ọ mee gị, ị maara usoro ị ga-eso n'ụdị ọnọdụ a.
1 Kedu mgbe anyị ga-eji nweta aha njirimara anyị
2 Etu esi azọ aha njirimara gị na Instagram
3 Otu esi ekwu ma ọ bụrụ na akaụntụ gị abanyela
Kedu mgbe anyị ga-eji nweta aha njirimara anyị
Na Instagram, A na-ahazi aha njirimara dabere na usoro nke ezigara arịrịọ na netwọkụ mmekọrịta. N’ihi ya, onye mbụ ga-arịọ ka e nye ya aha ga-ewe ya. Yabụ ọ bụrụ na aha gị bụ Eder Ferreño, dị ka m, ọ bụrụ na onye ọzọ ahọrọ aha ahụ, agaghị m enwe ike ịrịọ ya ma ọ bụrụ na onye ọzọ nwere ya. N'ezie, ị ga - ahụ na mgbe nke a mere, ngwa ahụ ga - akwado aha njirimara ndị ọzọ.
Agbanyeghị na enwere ikpe Instagram na-enye onye ọrụ ohere ịkọ akụkọ yana aha ya. Anyị achọtara ikpe abụọ akọwapụtara nke netwọkụ mmekọrịta na-enye ndị ọrụ a ohere a. Ọ bụrụ na ohi njirimara ma ọ bụ na mmebi nke ụghalaahịa.
Na nke mbụ, izu ohi njirimara, bụ mgbe mmadụ jiri aha gị, kama kama ọ na-ejikwa foto gị eme ihe na - eme ka ọ bụrụ gị na netwọk mmekọrịta, nwere ebumnuche nwere ike ịdị iche iche. Site na iyi egwu, ịpụnara mmadụ ma ọ bụ izu ohi nke data nke onye ọrụ ahụ.
Okwu nke abụọ nke Instagram anaghị anabata bụ mgbe anyị na-emebi akara ụghalaahịa, nke edebanyelarịrị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ mepee akaụntụ wee jiri aha ya @fnac. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbụ ịdebanye aha na aha ahụ, enweghị nsogbu. Mana ọ bụrụ na mgbakwunye na nke a, ị jiri akara ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ejiri ụghalaahịa chebe iji duhie ndị ọrụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwe nsogbu na netwọkụ mmekọrịta.
Ọnọdụ ọzọ ebe anyị nwere ike ịme ihe bụ ọ bụrụ na akaụntụ anyị abanyela, iji zuo ya ma ọ bụ gbanwee akụkụ ya. Instagram emeela usoro ị ga - esi weghachite akaụntụ ahụ. Mana nke a bụ ikpe atọ anyị ga - enwe ike ịza aha njirimara na netwọkụ mmekọrịta.
Etu esi azọ aha njirimara gị na Instagram
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkọ na enwere akaụntụ na - achọta gị na Instagram, anyị nwere ụdị dị. Can nwere ike ịnweta ya a njikọ. N'ebe a, anyị ga-ejupụta usoro azịza yana usoro anyị ga-eme iji gaa n'ihu na usoro ahụ. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnweta akaụntụ anyị, anyị nwere ike ime otú ahụ wee banye.
Nhọrọ nke masịrị anyị n'okwu a bụ Onwe onye mepụtara akaụntụ na-eme ka m ma ọ bụ enyi. Anyị pịa ya ma anyị enye ya ọzọ. N'ebe ahụ, ọ ga-ajụ onwe ya ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-eme ka ndị ọzọ, mgbe ahụ anyị ga-abanye data nkeonwe anyị (ezigbo aha na aha nna). Anyị ga-ahụ na anyị ga-etinye ụfọdụ akwụkwọ iji kwado usoro ahụ.
Instagram gwara ndị ọrụ ka ha zipụ akwụkwọ njirimara nke ahụ dị ire, ma ọ bụ DNI, paspọtụ ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala, nke ị nwere n'aka karịa n'oge ahụ. Na mgbakwunye, anyị ga-ede aha njirimara nke akaụntụ ahụ gosipụtara gị na-eji. A na-ajụkwa anyị ka anyị kọwaa otu ụdị spoofing a si na-eme na akaụntụ a.
Mgbe anyị nwere data niile, anyị ga-ezite ya. Anyị ga-eziga arịrịọ na Instagram ime ihe na nyochaa kwuru akaụntụ ozugbo enwere ike, iji wepu ya na netwọkụ mmekọrịta. Oge ọ na-ewe iji rụọ ọrụ arịrịọ a na-agbanwekarị. Ọ bụ ọnọdụ na-adịghị mma, mana gịnị na-eme ụfọdụ, belụsọ ma ọ bụrụ na inwere akaụntụ kwenyere.
Otu esi ekwu ma ọ bụrụ na akaụntụ gị abanyela
Ọ bụrụ na ihe merenụ bụ na mmadụ abanyela akaụntụ anyị na Instagram, azịza ya adịghị mgbagwoju anya. O yikarịrị, anyị agaghị enwe ike ịbanye na akaụntụ ahụ n'ụzọ nkịtị. Ya mere, na windo ịbanye na ngwa na gam akporo, pịa na nhọrọ a na-akpọ «Nweta enyemaka».
Ihe ozo anyi ga eme bu ide aha njirimara anyi na netwọkụ mmekọrịta, ma anyị pịa bọtịnụ ọzọ. Anyị ga-ahụ ga-ahọrọ usoro anyị chọrọ iji naghachi na akaụntụ. Ma ọ bụ SMS, email ma ọ bụ jiri akaụntụ Facebook. N'akụkụ ha Anyị na-enweta nhọrọ akpọrọ "you chọrọ enyemaka ọzọ?" nke bụ nke anyị ga-eji ma ọ bụrụ na akaụntụ anyị abanyela na netwọkụ mmekọrịta.
Site na ịpị ya, anyị na-ẹka a windo ọhụrụ nke anyị nwere ụdị. Anyị ga-abanye email, ụdị akaụntụ anyị nwere na Instagram na ihe kpatara na anyị enweghị ike ịnweta ya. Kọwaa nke ọma otu esi abanyela akaụntụ anyị, nke mere na o doro anya na ọ bụ ihe kpatara na anyị enweghị ike ịchọta ya. Ọzọkwa otu anyị nwere ike isi chọpụta ma ọ bụ n'ezie akaụntụ anyị.
Site na usoro ndị a, anyị na-enye gị izipu na Anyị ezipụlarị ụdị a na Instagram. Companylọ ọrụ ahụ ga-enyocha nke a ma yikarịrị ka ha ga-enyere anyị aka nwetaghachi akaụntụ anyị, ka anyị nwee ike iji ya na-ejikarị. N'okwu a, ezigbo ihe ngwọta bụ iji nyocha nkwenye abụọ, nke ahụ na-enye anyị nchebe ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kedu otu na mgbe iji kwuo aha njirimara gị na Instagram
Huawei ga-ekpughere 5G folda ekwentị izizi nke ụwa na MWC 2019